Truyền thuyết sớm nở tối tàn của hoa phù dung │Hoa tươi 360 | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Truyền thuyết sớm nở tối tàn của hoa phù dung │Hoa tươi 360 | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Truyền thuyết sớm nở tối tàn của hoa phù dung │Hoa tươi 360 | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Intle kakhulu kwaye ithandeka, kodwa bambalwa abantu abaziyo ukuba intyatyambo inxulunyaniswa nobomi bentsomi ehlwempuzekileyo, ende malunga nothando. Ngeentyatyambo ezintsha 360 bafunda ngentsomi yentyatyambo ye-ephemeral kunye nomfuziselo wokudumba kwangoko kunye nokufa kwale ntyatyambo.
1 Yintoni intyatyambo yedandelion?
2 Iintyatyambo ze-ephemeral zidubula kwangoko kwaye zibune – ilivo leentyatyambo ze-ephemeral
3 Intsingiselo yegqwirha
4 Ukusetyenziswa – Amayeza aluncedo kwinkungu yegqwirha
5 Ubuhle behazel yegqwirha
Yintoni intyatyambo yedandelion?
Ludidi lwesityalo sosapho lweCam Quy. Akho namanye amagama afana nala: inyibiba yasentlanjeni, Moc Phu Dung, Moc Lien…. Ezi intyatyambo ephemeral kukho amaphiko amaninzi. Kodwa amaphiko ayo mancinci yaye xa idubula, imdaka kwaye intle njengelokhwe yasentsomini, ubuhle bayo obuthandekayo benza ezinye iintyatyambo ezininzi zithandeke.
Funda malunga neentyatyambo ze-ephemeral
Kwaye kunjalo, iintyatyambo intyatyambo ye-Phoenix mfusa, idubula unyaka wonke. Kwaye le yenye yeetalente ezinqabileyo ezikhethiweyo ukuba zisetyenziswe ekuhombiseni. Intyatyambo yeNtshumayeli inamaphiko ama-5 kuphela, xa idubula, inkulu njengesitya. Ngokukodwa kwintyatyambo ye-ephemeral Kukho utshintsho oluqhubekayo lombala ngamaxesha ahlukeneyo emini.
Ngokuphathelele amagqabi, abunjwe yintliziyo, ingaphandle ingumphetho odibeneyo, ofanelekileyo ukuhlala kwimihlaba enomsoco kunye nelanga. Kwaye ngoku, I-Plantain ityalwe kakhulu eTshayina, eIndiya, kwiiPhilippines, eJapan naseUnited States.
Isityalo se-hazel yegqwirha
Iintyatyambo ze-ephemeral zidubula kwangoko kwaye zibune – ilivo leentyatyambo ze-ephemeral
Ikamva laba bantu babini lidityaniswe ngokumangalisayo nemithetho engqongqo yezulu yenza uPhu Dung waba yintyatyambo entle nentle. Kodwa le ntyatyambo iqhakaza kuphela emini, kwaye xa uyizisa, iyawa ukunika abo bathanda ukujonga le ntyatyambo i-nostalgia encinci. Intyatyambo ye-phoenix intle kodwa iyabuna ngokukhawulezaKufana neemvakalelo zomntu.
Kuthiwa ngaphambili, kwakukho i-fairy enesimo esithambileyo nesinobubele, kodwa ubuso bakhe babuhlala bubuhlungu, igama lakhe elisemthethweni lalingu “Fairy Phu Dung”.
Ibali leNtyatyambo yoMngcwabo
UKumkanikazi uMama wayemthanda kakhulu, ngoko wamnika ubabalo, olwalukukuhamba amachibi amane eentaba kwaye ahlole umhlaba ngosuku olunye ukuze alibale zonke iintsizi zakhe aze abuyele kwibhotwe lasezulwini. Ukuhla emhlabeni ukuze ubone iintaba ezinkulu, kodwa ichibi eliluhlaza okwesibhakabhaka … yonke into yayiyimbongo kwaye ilula kangangokuba walibala zonke iingxaki kwi-fairyland. Wayefuna ukuntywiliselwa kwimbonakalo yendalo, ejonge kumanzi apholileyo aluhlaza kwakungenakuzinceda kodwa azintywilisele emfuleni. Kodwa ngonaphakade eluthandweni nolonwabo, waphulukana nekhubalo lesibhakabhaka – ikhubalo lokubhabha ukubuyela ezulwini. Wakhawuleza waya elunxwemeni ekhangela kodwa akazange ayifumane, kwakusiya kusiba mnyama Phung Dung wakhathazeka walila.
Kanye ngelo xesha, umzingeli ogama lingu-Dong Tam wabuya ekuzingeleni waza wambona ekhala waza wambuza ngayo. Wenza ngathi ulahlekelwe sisithandwa sakhe akayazi nendlela egodukayo. UDong Tam wamsizela waza wamsa endlwini yakhe ukuba ahlale okwethutyana. Usapho lukaDong Tam luhlwempuzekile kwaye lunomama owalupheleyo kuphela ogula kakhulu. Unina wayegula kakhulu, ngoko kwafuneka aye kuzingela ehlathini ukuze afumane imali yokumthengela amayeza. Ukuva oku, uPhu Dung wamcebisa: “Yonke into ekhoyo emhlabeni inobomi, musa ukumbulala umntu ngenxa yokutya”. UDong Tam naye uyayazi loo nto, kodwa ngenxa yokuba usapho lwakhe luhlwempuzeke kakhulu, ukuba akazingeli, angayifumana phi imali yamayeza kumama wakhe owalupheleyo. UPhu Dung eyiqonda intliziyo yomntwana wehlwempu, waphendula wathi unamayeza, makahambe aye entabeni ayokufuna imifuno yokuphekela unina noyise amayeza afunele imifuno etyiwa okwexeshana, ndicela ungazingeli izilwanyana. kwakhona. Umama kaDong Tam uyavumelana kakhulu nale mbono kaNksz Phu Dung.
Ukususela ngoko, rhoqo kusasa, uFurong kufuneka avuke ekuseni kakhulu ukuze abambe umbethe engceni, aze aye entabeni aye kufuna imifuno exabisekileyo ukuze ayipheke. Ke yena uDong Tam, waya ehlathini ukuya kugawula iinkuni aze abuye nazo ukuze azithengise. Njengoko iintsuku zazihamba, nangona ukugula kukamama ka-Dong Tam kuphila ngokupheleleyo, endaweni yoko, ngenxa yokuba wayediniwe kakhulu, uPhu Dung waquleka. U-Dong Tam unombulelo kakhulu kuye, ngoko wamnyamekela kakuhle.
Intyatyambo entle yeFurong
Ukubona izandla zakhe ezincinci zikhatywe kwaye zikrwelwe ngameva xa wayenyuka intaba esiya kukha amayeza, esomba izityalo zamayeza okunyanga umama wakhe, uDong Tam wachukumiseka kakhulu kwaye unombulelo kuPhu Dung. Kancinci kancinci aba babini bavelisa iimvakalelo kwaye bathandana, uPhu Dung naye walibala ngezinto zaseThien Dinh kwaye wahlala ngolonwabo noDong Tam emhlabeni.
Ekupheleni kwexesha losuku olunye, uKumkanikazi uMama akazange abone i-fairy Furong ebuyile, ngoko ke wacinezela i-hexagram kwaye wayesazi ukuba ngenxa yokuba ephulukene ne-amulet yasezulwini, akanakubuyela ezulwini, kodwa wayenothando nabantu abafayo. , ngoko nangoko yanika umkhosi wasezulwini injengele ukuba imbuyise. Ngaphambi kokuba abanjwe, uPhu Dung wanika uDong Tam indlela yeperile eyayinokukhumbula ixesha elidlulileyo kunye nekamva kwaye ihlale imkhumbula.
Emva kokubuyela eThien Dinh, uMama kaWang wagxeka uPhu Dung. Nangona kunjalo, uxelele uKumkanikazi uMama ukuba angavuma ukurhweba ngokuziphatha kwakhe kwewaka leminyaka ukuze abe ngumntu ophilayo kwaye ahlale eMpuma. U-Queen Mother wayenomsindo waza wathi, “Ubomi buzizalwa kwaye buzitshabalalisa, kunzima kakhulu ukufezekisa umphumo ochanekileyo. Ngoku akufanelekile ukutshintshisa iwaka leminyaka yokuziphatha kwabantu abafayo, ihlabathi lomntu alikho. unengqondo njengoko ucinga.” U-Phu Dung wancenga ngentliziyo yonke kwaye wamkela ukubheja kunye no-Queen Mother, ukuba u-Dong Tam wayengenamdla kuye kwaye wayengonwabanga e-Dong Tam, uPhu Dung wafunga ukuba akasayi kuba ngumntu.
Umama waqhubeka wathi: “Kungakhathaliseki ukuba u-Dong Tam uthandana kangakanani, akayi kusinda kwimbono yoluntu kunye nokuziphatha. Kusacetyiswa ukuba ucinge ngokucophelela, ukuze ungazisoli ngexesha “.
Noko ke, walwamkela ngokupheleleyo olo celomngeni.
UPhu Dung waphinda wazalwa emhlabeni kodwa wayeyindoda, engengomfazi, nangona wathatha imo yendoda, kodwa intliziyo nomphefumlo wakhe wawusengamantombazana. Wayebuhlungu kakhulu kwaye waginya iinyembezi ezikrakra ezama ukufumana uDong Tam, kodwa ikamva lalimiselwe, ngoko kwamthatha iminyaka engama-20 ukufumana uDong Tam.
Xa waphinda wambona ekwimo yendoda, uDong Tam wamangaliswa kakhulu, kodwa ngenxa yokuba kwakukho iperile ngaphambili eyabanceda bazana. Babonwabile, bonwabile, beswiti, bekrakra, iinyembezi bezisoloko zisehla. Kodwa okumangalisayo kukuba, uDong Tam wayenomfazi nabantwana ababini abancinci. Wayezisola, kodwa ngenxa yokuba wayezama ukoyisa ucelomngeni olwalulungiselelwe ngumama wakhe, kwafuneka ayamkele.
Aba babini kufuneka babonane ngokufihlakeleyo amaxesha ambalwa ngenyanga ukuze bonwabe kunye. Nangona kunjalo, ekugqibeleni, inaliti engxoweni ixesha elide nayo yaphuma, umfazi kaDong Tam wafumanisa. Ibali laphuka, kodwa ngalo mzimba uchaza, bambalwa abantu abakholelwa kuyo, yonke into igqitywe nguDong Tam. Ngenxa yokuba umfazi wakhe unyanzelekile ukuba akhethe enye kuphela kwezi zibini. UDong Tam uyamthanda uPhu Dung, kodwa ngenxa yokuba abantwana bakhe ababini abancinci bekhala ngeentlungu, kufuneka ancame ukumngcatsha ukuze abuyele kusapho lwakhe.
Intliziyo kaFurong yayaphukile, kwaye imithambo yegazi emzimbeni wakhe yaphukile, kwaye i-jade lode nayo yaguqulwa yaba luthuthu. Ngoko wafa elusizi, ekhathazekile, yaye umphefumlo wakhe wawuxhomekeke emithini Intyatyambo yomngundo. UDong Tam wayesazi ukuba ufuna ukufa naye, kodwa ngenxa yokuba wayesenomthwalo wabantwana ababini abancinane emagxeni akhe, akazange akwazi. Waginya iinyembezi engumntu olindelekileyo. Ubusuku nemini khala kunye Intyatyambo yomngundokodwa uKumkanikazi uMama akazange afune ukuba anqotshwe ngokuncamathisela, ngoko ke wavumela iintyatyambo ukuba ziqhakaze emini kwaye ekutshoneni kwelanga ziphele kwaye ziwe ukuze kuthintelwe uFurong ukuba angabi buhlungu xa ebona uDong Tam.
Njengoko ilivo lentyatyambo ye-ephemeral ngaphezulu ke intyatyambo ye-Phoenix ubomi obufutshane kakhulu. Intyatyambo idubula kusasa, kwaye ngokuhlwa, iyabuna. Kufana newotshi edlulayo ingalindanga mntu. Kuba obo bubomi, ubomi abunasiphelo, ubomi buyabonakala. Yaye ngokuqinisekileyo, ubuhle obumangalisayo, kungakhathaliseki ukuba banekratshi kangakanani na, ekugqibeleni buya kuphela ekuhambeni kwexesha.
Ezi ntyatyambo zifuna ukubhekisela kubafazi abancinci abaneemeko ezininzi, ngaphandle bangumfanekiso oqaqambileyo kunye nobuhle, kodwa ngaphakathi, babuhlungu. Ngenxa yokuba kwimihla yakudala i-sandcastles yayingavezwanga kwihlabathi langaphandle, ingakhululekanga ukwenza into abayithandayo, ngoko kwakunje. umfanekiso wentyatyambo ye-ephemeral ngoko.
Intsingiselo yentyatyambo yenyibiba yegolide
Intsingiselo yegqwirha ayikapheli apho. Ikwanayo nentsingiselo yebali lothando elilusizi nelingathandekiyo. Ngamagqabi e ubugqwirha ukutshintsha umbala ukusuka kusasa ukuya emva kwemini. Yaye ngengomso, yayisele lisebe elishwabeneyo. Kwaye kuyafana naseluthandweni.
Uthando luya kutshintsha ekugqibeleni, luguquke, lubanda, luze ekugqibeleni luphuke ngokwemithetho yendalo. Nge Intsingiselo yentyatyambo yegqwirha Ngeli xesha, ifuna ukusikhumbuza ukuba siyeke ukulinda, ukucinga kunye nethemba. Kuba okukhona silindele okuninzi, kokukhona siya kudana iziphumo.
Ukusetyenziswa – Amayeza aluncedo kwinkungu yegqwirha
Ukwakheka kweekhemikhali kwi intyatyambo ye-Phoenix yiAnthocyanin, Isoquercitrin, Hyperin, Hyperoside, Rutin, Quercitin-4′-glucoside, Spiraeoside, Quercimeritrin… Kukho i-mucus encangathi kwiintyatyambo kunye namagqabi.
Ukunyanga i-chalazion kunye ne-stye:
Sebenzisa intyatyambo ye-Phoenix kunye ne-mint entsha, i-3g nganye, ihlanjwe, igxothwe kwaye ifakwe kwi-joint okanye i-stye, amaxesha angama-2-3 ngosuku.
Sebenzisa iintyatyambo okanye amagqabi eplantain 18g, 12g rhubarb, 9g Angelica, 9g licorice. Zonke ezomileyo, zigaywe zibe ngumgubo ococekileyo, oxutywe neti okanye ioli yeesame esetyenziswe kwi-lesion. Okanye intyatyambo ye-Phoenix 15g, 9g intonga, izinto ezimbini zomgubo, zixutywe neoli yesesame kwaye ziqatywe kwindawo etshisiweyo. Faka isicelo ngamaxesha e-3 ngosuku kwindawo echaphazelekayo ngokutshisa. Okanye sebenzisa iintyatyambo ezintsha zeplantain ngokwaneleyo ngokwaneleyo ukuntywila kwioyile yokupheka de iintyatyambo zitshone ezantsi, emva koko ucofe intsalela, uyigcine kwingqayi etywiniweyo kwaye uyisebenzise kancinci kancinci, amaxesha angama-2-3 ngemini, sebenzisa i-gauze oyinyumba okanye umqhaphu ofakwe kuyo. ioli epholileyo epholileyo.
Ukopha kakhulu exesheni:
Intyatyambo yeNtshumayeli (sebenzisa esanda kuqanduselwa, umbala omhlophe awukatshintshi) omisiwe, ubukhali nge-200ml yamanzi ukuya kwi-50ml, uphuze kanye ngosuku, usele iintsuku ezi-7. Okanye ephedra eyomileyo gaya umgubo ocolekileyo, isibuko se-lotus (uhlobo oludala lungcono) sitshiswe ukuze siphile, sihlakazwe kakuhle. Xuba ezi zimbini ngexabiso elilinganayo. Phuza kabini ngosuku, i-8g ngexesha ngalinye ngamanzi erayisi, usele ngaphambi kokutya. Sela iintsuku ezingama-5-7.
Sebenzisa amagqabi okanye intyatyambo ye-Phoenix Ukuphilisa Nge 20g, yiponde kwaye uyiqabe kumaqhakuva. Xa iyeza lomile, libuyisele elinye iyeza. Lo myalelo usebenza kwi-acne entsha ekhulayo, inokuphelisa intlungu kunye ne-acne iya kuhamba; Ukuba i-acne ivuthiwe, iya kugqabhuka ngokukhawuleza ubovu.
Nyanga izidlele ezisithoba:
I-20g yeentyatyambo zeplantain okanye amagqabi, i-20g purslane, i-20g ye-pepper banana tubers, i-10g yetyuwa. Zonke zintsha, zixutywe, zifakwe kwi-gauze. Faka isicelo kabini ngosuku, iintsuku ezi-3-5.
Ukunyanga ukudumba kwebele:
Iintyatyambo okanye amagqabi i-edema iphilisa ukudumba kwebele kunye 50g, 50g ihlumelo basil. Ezi zimbini zinencasa zisetyenziswa zintsha, zihlanjiwe, kwaye zisikiwe. Faka isicelo kanye ngemini emini, ngokuqhubekayo kangangeentsuku ezi-3.
Sebenzisa i-wig hazel ukunyanga izifo kunye nekhonkco lembotyi encinci (iimbotyi ezincinci ezibomvu) 15g nganye, izinto ezimbini ezicoliweyo, zixutywe nobusi kwaye zigalelwe kumalungu adumbileyo. Faka isicelo kanye ngemini ngokuhlwa, ngokuqhubekayo kangangeentsuku ezi-5. Okanye amaqabunga e-plantain, omisiwe, omgubo, axutywe nobusi kwaye asetyenziswe kumalungu avuthayo.
Isityalo sedandelion sineendlela ezininzi zokunyanga
Nyanga zonke iintlobo zamathumba:
Amagqabi omkhiwane owomileyo, umhlaba ocolekileyo, iiapilkosi zentloko yehashe (indlebe eninzi) – iziqhamo zeenkwenkwezi (zigcadiswe okanye zitshiswe ngomlilo omkhulu de umphezulu weyeza ube mnyama njengamalahle, kodwa ngaphakathi ugcina umbala weyeza), umhlaba ocolekileyo . Izixa ezibini ezilinganayo. Xuba nobusi kwaye udibanise kakuhle. Isetyenziselwa ukunyanga zonke iintlobo zamathumba ezifana namajuniors, iinzipho, amathumba, izidlele ezilithoba, ukudumba kwebele (idlala lebele)…
Unyango lweeshingles (iishingles):
Sebenzisa amagqabi okanye intyatyambo ye-Phoenixeyomileyo emthunzini, i-powder, ixutywe neviniga yerayisi, isetyenziswe kwisilonda, amaxesha angama-3-4 ngosuku.
Sebenzisa igqwirha 9-10 ikotoni, i-decoction yamanzi okusela; 2-3 amaxesha ngosuku.
Unyango lweliso elibomvu:
Sebenzisa amagqabi ubugqwirha, omisiwe emthunzini (yin), umhlaba ocolekileyo, oxutywe ngamanzi kwi-paste, usetyenziswe kwiitempile, ugxininiswe nge-tape yokubambelela; ukutshintsha iyeza 2-3 amaxesha ngosuku.
Ubuhle behazel yegqwirha
Amaqela eentyatyambo ze-pink ephemeral
Iqela leentyatyambo ezimhlophe ezinamagqabi ephedra kwimvelaphi yamagqabi aluhlaza
Umqhaphu omhlophe ovuthulukileyo wagoba eneentloni phambi komoya
Umbala opinki xa kuhlwa kuwela iintyatyambo ze-ephemeral
I-ephedra ene-petaled enye enombala omhlophe ococekileyo
I-JOINT STOCK COMPANY 360 – Inkonzo entsha yokubonelela ngeentyatyambo kumaphondo angama-63
Iwebhusayithi: hoatuoi360.vn | hoalan360.com | hoavily.com
Giải Đáp Cây Phú Quý Có Hoa Không | Hatgiongtihon.net
Say trong ba sắc phù dung một ngày | Hatgiongtihon.net